Fanomezana WWE 5 ho an'ny zazavavy amin'ity Krismasy ity - Wwe
Amin'izao vanim-potoana izao, tsy dia mazava loatra ny famaritana ny kilalao zazavavy sy kilalao zazalahy. Ny tovovavy dia matanjaka kokoa noho ny tamin'ny taranaka teo aloha, ary maro ny fanavakavahana notohanana tamin'ny taranaka lasa no simba. Ao anatin'izany ny ankehitriny mihoatra ny taloha, misy tovovavy izay mpankafy lehibe ny WWE.
Ary na dia ny ankizivavy aza dia mety manana ny ankafizin'izy ireo amin'ny lisitry ny lehilahy satria izy ireo dia avy amin'ny vehivavy, mijoro koa isika ao anatin'ny vanim-potoana tsy manam-paharoa amin'ny tantaran'ny tolona raha toa ka mihozongozona kokoa noho ny teo aloha ny vehivavy raha ny amin'ny fotoan'ny fahitalavitra sy ny fotoana ahafahana manao izany. hamirapiratra amin'ny lalao asongadin'ny. Eny tokoa, ny mpilalao an'i Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks, ary ny orinasa dia namaky tany vaovao ary hevitra mety loatra hanomezana hery ilay mpankafy vehivavy mpiady amin'ny alàlan'ny fankalazana ireo vehivavy WWE Superstars mety tadiaviny hahazo aingam-panahy. Ity lahatsoratra ity dia mijery fanomezana WWE dimy ho an'ny zazavavy amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra.
# 5 The Charlotte Flair & Becky Lynch Series 55 Mattel Action Figure 2-Pack
Ny set Becky Lynch sy Charlotte Flair dia tsara ho an'ny mpankafy SmackDown
Sarotra ny mandà an'i Charlotte Flair vs. Becky Lynch no mpifaninana vehivavy lehibe indrindra amin'ny WWE ankehitriny, nasongadin'ny ny Last Woman Standing Match mahatalanjona tao amin'ny Evolution PPV. I Lynch, indrindra, dia nirehitra tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny fihodinan'ny ombelahin-tongony elektrika ary naneho ny toetrany mihabe hatrany rehefa mandeha ny volana, farany teo ny tampony rehefa nitarika fanafihana ny lisitra vehivavy Raw izy hatramin'ny Survivor Series. Mandritra izany fotoana izany, WWE dia nanambola be tao amin'ny Flair ary izy no iray amin'ireo filokana azo antoka indrindra amin'ny lisitra iray manontolo izay mijanona eo amin'ny sain'ny taona ho avy.
Ity tarehimarika hetsika roa ity dia ahafahan'ny ankizy milalao lalao misy azy ireo eo anelanelan'ireto talenta ambony roa ireto, na mampiseho azy ireo ho toy ny famoahana kanto kintana SmackDown mendrika hankalazana, indrindra ho an'ny zazavavy.
manova ny fiainako amin'ny fitiavanao
fomba hitohizan'ny resaka
maninona no tsy mihaino ahy ny olona
zavatra tokony hatao ho an'ny lehilahyo amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany